Milavonjy Philobert : Tokony hamaky ny Lalàna rehetra ny KMF/Cnoe -
AccueilSongandinaMilavonjy Philobert : Tokony hamaky ny Lalàna rehetra ny KMF/Cnoe
Milavonjy Philobert : Tokony hamaky ny Lalàna rehetra ny KMF/Cnoe
Hiarahan’ny rehetra mahalala ny mikasika ny lalàm-pifidianana telo izao fa efa ampandinihana azy ny anivon’ny Antenimieram-pirenena amin’izao fotoana izao, ary izy ireo no manana fahefana farany amin’ izany lalàna izany raha toa ka hisy ny fanitsiana na tsia. Noho izany dia misy amin’ ireo filohana vondrona antoko eny anivon’ny antenimieram-pirenena toa ny VPM/MMM amin’ izao ny milaza fa “avelao izy ireo hiasa malalaka tsy anatin’ ny faneriterena”. Ny faran’ ny herinandro teo mantsy dia nisy tamin’ireo fiarahamonim-pirenena toa ny KMF/CNOE no nilaza fa tsy ampy ny fito andro hanatanterahana ny fampilezan-kevitra ho an’ ny fihodinana faharoa, tsotra ny fanazavana izay nentin’ny filohan’ny vondrona antoko VMP/ MMM Milavonjy philobert fa “ araka ny andininy faha- 46 anatin’ ny lalàm-panorenana mazava fa 60 andro no hanatanterahana ny fifidianana, dia io no narahina tamin’ny fandrafetana ny lalàm-pifidianana. Midika izany fa manara- dalàna tanteraka ny fitondram-panjakana, ary tsy mivoana amin’ izay voalazan’ny lalàna fototra” hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’i Milavonjy Philobert. Nanamafy hatrany anefa ity solombavam-bahoaka ity fa “ narahina ny lalàna, ary ny filoham-pirenena dia efa nilaza fa misy ny tsy fahatomombanana eo amin’ny lalàm-panorenana izany hoe eo amin’ io andininy faha-46 io ka ilana fanitsiana. Tsy nanaiky izany anefa ny rehetra, fa ny hoe mitady hanitatra fotoam-pitondra indray. Noho izany tsy tokony himenomenona ny rehetra na ny mpanohitra, satria io no voalazan’ny lalàm-panorenana”. 30 andro voalohany tokoa izany no manatanteraka ny fampielezan-kevitra ny programan’asany ny kandida rehetra, ary manamafy izany sisa anatin’ny 7 andro amin’ ny fihodinanana faharoa raha toa ka lany.
Nohamafisin’ity filohan’ny vondrona parlemantera VPM/MMM ity ihany koa fa lalàm-pifidianana efa natao araka ny hevitry ny rehetra ity lalàm-panorenana ity, ka noho izany tokony ho fankasitrahana aza no atao hoy izy amin’ny fitondram-panjakana fa tsy fanakianana. Nahitsy ary tsy nikely soroka mihitsy moa i Milavonjy Philobert manoloana ny zava-misy, indrindra ho an’ireo mpanakiana be fahatany “manana ny holazaina foana ny mpanohitra na dia hita izao aza fa tsara ny zavatra atao , indrindra ho an’ ny firenena”. Nambarany mantsy fa misy ireo olona tsy misy atao afa-tsy ny fisintonana lakolosy fotsiny, ary anisan’izany hoy izy ny mikasika ny voalazan’ny lalàm-pifidianana amin’ny fiverenan’ny filoham-pirenena amin’ny asany indray, raha sanatria misy ny tsy fahalaniana
“Raha misy ny fialany mialoha amin’ny asany raha toa ka hilatsaka hofidiana ny filoham-pirenena amperin’asa, ka tsy lany izy ohatra dia rariny izy nitondra ny firenena niasa nandritra ny dimy taona no hanatanteraka ny fifandimbiasam-pahefana amin’izay lany eo, fa tsy olona mpisolo toerana roa volana indray no andeha hanao izany “hoy hatrany ny fanazavana izay nentin’ i Milavonjy Philobert.
Manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ihany koa dia maro hoy ity solombavambahoaka ity ny zavatra tsikaritra , indrindra ankatoky ny fifidianana amin’ny faran’ny taona ho avy izao. Tsikaritra hoy i Milavonjy Philobert ny fisiana mambra sasany amin’ny governemanta misabaka amin’ ireo kandida hafa “ Tokony hisy ny mambran’ny governemanta sasany tokony hosoloina, satria maro ireo tsy mahavita ny asany izay nankinina taminy sy ny asa izay andrasan’ny vahoaka aminy. Noho izany aorian’ny fandaniana ny lalàm-pifidianana dia tokony ho sahy handray andraikitra ny filoham-pirenena, hanolo ary tsy hanome vahana ireo izay tsy mahafa po amin’ny asany sy ny andraikitra izay nankinina taminy. Miantomboka izao ny fotoana tsy hijerena tavan’olona sy hena maso, mba tsy hilazana hoe misy amin’ izy ireo no efa misabaka” hoy hatrany i Milavonjy Philobert.